DataNumenUbulungu beMibutho yaMazwe ngaMazwe
Ikhaya > Ubulungu beMibutho yaMazwe ngaMazwe
Ubulungu beMibutho yaMazwe ngaMazwe
DataNumen uhlawula kakhulu ingqalelo kunaniselwano lwamazwe ngamazwe kunye nentsebenziswano. Inamalungu amaninzi kunye nentsebenziswano nemibutho ebalulekileyo yesizwe neyamazwe aphesheya. Sigcina unxibelelwano olusondeleyo ngokukodwa kumaziko adweliswe apha, kodwa DataNumen Ikwasebenza kuluhlu olubanzi lwamanyathelo kunye nentsebenziswano kwimimandla yesoftware, eqhelekileyo, indalo kunye nokuzibandakanya kwezentlalo.
Isoftware kunye noMbutho woShishino loLwazi
Isoftware kunye noMbutho woShishino loLwazi yenye ye most Imibutho ebalulekileyo yorhwebo lwesoftware kunye nomzi mveliso wedijithali. I-SIIA ibonelela ngeenkonzo zehlabathi kubudlelwane bakarhulumente, uphuhliso lweshishini, imfundo yequmrhu kunye nokukhuselwa kwepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kwiinkampani eziphambili.
Umbutho wabathengisi beSoftware abazimeleyo
Umbutho wabathengisi beSoftware abazimeleyo (i-OISV) ngumdibaniselwano wabaphuhlisi besoftware, abathengisi, abasasazi, kunye nabathengisi abadibanisa iingcinga zabo kunye nemibono yokwenza isoftware kunye nokwenza ngcono wonke umntu. I-OISV isekwe kwixabiso lokulingana, idemokhrasi, ukuthembeka, ubumbano kunye nokunceda abanye bafezekise iinjongo zabo.
Iingcali zeshishini leSoftware
Iingcali zeshishini leSoftware lelinye lawona maqela makhulu emele amalungu eshishini lesoftware, elinamalungu angaphezu kwama-2400 kumazwe angama-93.
Umbutho wabaSebenzi abaSebenzayo beSoftware
I-AISIP ngumbutho wobungcali wabantu abasebenza kwimveliso yesoftware ezimeleyo. Most Amalungu e-AISIP athengisa isoftware kunye neenkonzo kwiiwebhusayithi zabo, kwaye bazabalazela ukubonelela ngeemveliso ezixabisekileyo, ezifanelekileyo ngelixa besenza ingeniso.
Intsebenziswano yeSoftware yezeMfundo
I-ESC (intsebenziswano yeSoftware yezeMfundo) ngumbutho ongenzi nzuzo odibanisa abaphuhlisi, abapapashi, abasasazi kunye nabasebenzisi besoftware yezemfundo.
Umbutho waMazwe ngaMazwe wokuBuyisa iiNgcali
I-IPDRA (uMbutho weHlabathi woBuyiselo lweDatha yoBuchule) isetelwe ukunceda imibutho kunye nabantu ababene lost idatha ngokubakhomba kwinkampani yokufumana idatha efanelekileyo, enamava kwaye eqinisekisiweyo.